Ungazifumana njani isincamatheliso simahla kwiVK? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Indlela yokufumana izitifiketi zamahhala kwiVK?
Ungagcina into njengemifanekiso, kodwa ngokwenene uyathuthunjiswa ngokwenza njalo !!! Kwaye zininzi izinto zokuzonwabisa izitikha, amehlo sele ebalekile. Ndiyenzile ngaphambili, kodwa emva koko ndafunda indlela engcono. Iyasebenza, ngelishwa, kuphela kwisikhangeli Google Chrome, kodwa ngoku ungasebenzisa ABSOLUTELY zonke izitikha simahla.
Yiya kwi-quot; ibrawuza, emva koko kwi-quot; extensionsquot;, ke emazantsi e-quot; ngaphezulu extensionsquot ;. Namathisela isicatshulwa;I-Emojiplus& quot; kwaye yongeze. Qala kwakhona isikhangeli sakho kwaye ugqibile! Jonga Ukunxibelelana iphaneli nge izincamathelisi kunye noncumo, kufuneka kubekho izincamathelisi ezintsha. Ukuba akunjalo, ndinike ixesha, nam andikhange ndivele kwangoko. Ngendlela, xa uyisebenzisa, ulwandiso ngokwalo luya kuhlala luvulekile kukunika ithuba lokususa ezinye zezitikha ezicaphukisayo okanye ngokuchaseneyo ukongeza into entsha.
Kukho ezi zincamatheliso ukuze zikhululeke, azinikwanga nakanye. Banikwa iintshukumo zakho eziluncedo kwisiza, ezibandayo phantsi ukuthumela iifayile kunye nemifanekiso ehlekisayo, oko kukuthi, ukonwabisa ngokungalunganga iindwendwe esizeni.
Akunakwenzeka ukufumana izitikha ezisemgangathweni simahla, oko kukuthi, ezo zibonelelwa yindawo ngokwayo. Ungabathenga ngenani elithile, kaninzi ngaphakathi kwee-ruble ze70. Ukongeza, nabaphi na abahlobo bakho banokukuthengela ezi zincamatheliso kwicandelo lesipho. Kodwa uninzi alufuni kuchitha imali encinci, kule meko, ungasebenzisa iiplagi ezikhethekileyo kunye nezandiso zokukhangela okukuvumela ukuba usebenzise izitikha simahla. Kodwa kuya kufuneka ukuba usebenzise iinkqubo ngononophelo olukhulu, kuba kukho ithuba lokubamba intsholongwane.
Ngokwazi kwam, ngokwenene akukho ndlela yokusebenza. Kwi-Intanethi kukho iisayithi ekufanele ukuba zibanike zona, kodwa zihlala zi-scammers abazama ukutsiba ipaswedi yakho yokunxibelelana. Itshizi yasimahla yenzeka kuphela kwimouse.
Isincamatheliso simahla somntu wonke !!!
Isincamatheliso simahla se-vk
Isincamatheliso simahla somntu wonke !!
Izitikha simahla ziyafumaneka apha. Kukho nomyalelo wokuba ungazithumela njani ezi foto zihlekisayo kubahlobo. Kwakhona, amalungu eqela anokubonelela ngezimvo zawo ngezitikha ezintsha - ezona ziqhelekileyo nezingahlukileyo.
Mva kwemini, njengoko uqonda izitikha, le yenye yeendlela zokufumana imali kwi-VK. Ke, ngokufikelela simahla, awukwazi ukukhangela. Kodwa kukho iindlela ezininzi ezinokukunceda ukuba ufikelele apha:
Njengoko ubona, unokukhetha indlela yokufumana izitikha ozifunayo.
Unokwazi ukuhlangula izincamathelisi kwiVKontakte ngokuzitshintshela ngeevoti (imali yeVKontakte). Iivoti zingathengwa okanye zifunyanwe ngokugqibezela imisebenzi eyahlukeneyo. Ke, uya kufumana izitikha ngaphandle kokuchitha i-ruble enye. Ungasifumana isincamatheliso simahla ngenye indlela - fumana njengesipho komnye umsebenzisi.
ungazifumana apha simahla okwangoku
Fumana ezi zincamatheliso ngaphandle kokuchitha ivoti enye kuzo aziyi kusebenza nangayiphi na indlela. Nangona kunjalo, unokukopela kwaye usebenzise idatha yomfanekiso njengemifanekiso. Oku kulula kakhulu: sebenzisa isicatshulwa; isitshixo sokushicilela; isitshixo. Emva kokufumana ikopi yomfanekiso wesikrini kuyo nayiphi na imhleli yemizobo, ungazehlula-hlula ube zizitikha ngokwahlukeneyo.
Ngelishwa, awuyi kuba nakho ukufumana izincamathelisi kwiVK simahla, kuya kufuneka uhlawule. Ekuphela kwento enokukuhlangula, ukuba uzithanda ngokwenyani izincamathelisi, ziyisebenzise njengemifanekiso. Okokuqala, kuyakufuneka ukuba uthathe umfanekiso wesikrini ngezitikha ngokucofa isitshixo esinjengokucaphula; Shicilela iScreenquot ;, emva koko kuya kufuneka uyihlelele uyipende.
Akukho ndlela yasimahla. Kodwa ngokokwazi kwam, ungachitha iivoti zakho. Kwaye ukuze uzuze, unokubeka isixeko saseMoscow, kunye nobudala be-21. Le yeyona nto iphambili. Kwicatshulwa; yiya kwi-quot; Iintlawulo zokuhlawula; imisebenzi kufuneka ibonakale ngathi iyavela. Ayizukuhamba ngoko nangoko. VK kuqala imodareyitha iphepha emva koko yonke into iya kuvela. Funda malunga nayo kwi-intanethi. Ndiyijonge kwiYouTube. Ngethamsanqa
Imibuzo ye-61 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,356.